Amasu Esigqebhezana Ayisi-7 Ongawahlanganisa Nobhadane Ukushayela Ukuguqulwa Okungaphezulu Ku-inthanethi | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 2, i-2021 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 2, i-2021 UJulia Krzak
Izinkinga zesimanje zidinga izixazululo zesimanje. Ngenkathi lo muzwa uqinisile, kwesinye isikhathi, amasu amahle wokumaketha ayisikhali esisebenza kakhulu kunoma iyiphi i-arsenal yomthengisi wedijithali. Futhi kukhona yini okudala nobufakazi obungenangqondo kunesaphulelo?
Ezentengiselwano zibhekane nokushaqeka okulethwe wubhadane lwe-COVID-19. Ngokokuqala ngqa emlandweni, sabona ukuthi izitolo ezidayisa izinto zibhekana kanjani nesimo semakethe esiyinselele. Ukuvalwa okuningi kuphoqe amakhasimende ukuthi athenge ku-inthanethi.
Inani lezitolo ezintsha ezenziwa online emhlabeni wonke kungxenyekazi yalo lenyuke ngo-20% emasontweni amabili edlule kaMashi 2020.
Ngenkathi kokubili ukuthenga kwendabuko nokuxhumeka ku-inthanethi kutholile impela, umhlaba wedijithali ukwazile ukusukuma ngezinyawo ngokushesha okukhulu. Kungani? Ukunikezwa okubanzi kwezaphulelo namakhodi wokukhushulwa athengise ukuqiniswa kwamapulatifomu we-ecommerce. Izitolo ezidayisa futhi zenze okuningi ukuhlala zingantengantengi ngokwandisa inani lezinyuso kanye nokunikezwa okuhehayo, okuholela ekutheni kube nentshisekelo enkulu ekuthengeni nge-inthanethi, isixazululo esiphephe kakhulu phakathi nobhadane oludlangile.
Yini eyenza amakhuphoni isu elihle lokutakula le-COVID? Ngamafuphi, izaphulelo zivumela ama-brand ukuthi akhombise ukuthi ayakhathala ngenkathi ehlala efinyeleleka kumakhasimende azi intengo ngamabhajethi aqinile kunokujwayelekile.
Ngalokhu okuthunyelwe, ngifuna ukukunikeza amazwibela emikhankaso yekhuphoni esebenza kahle kakhulu ngezikhathi zokungaqiniseki kwemakethe okubangelwa yi-COVID-19.
Nayi imikhankaso yami yekhuphoni ephezulu ye-ecommerce yangemva kobhubhane:
Amakhuphoni abasebenzi abalulekile
Thenga eyodwa, uthole eyodwa mahhala or amabili ngentengo eyodwa (BOGO) ukukhushulwa
Thenga amakhuphoni wemvamisa
Amakhuphoni wokuthumela wamahhala
Izikhuthazo ezisebenzisa amaselula
Landa Umhlahlandlela Wokugcina Wamasu Okukhangisa Wekhuphoni
Isu Lekhuphoni 1: Izipesheli Zabasebenzi Ababalulekile
Phakathi kokuthengiswa kwama-flash okudala kanye namadili we-BOGO, i-COVID-19 iphinde yandisa ukunikezwa kwamasango namakhodi amakhuphoni akhuliswe yi-CSR abasebenzi besibhedlela nabaphenduli bokuqala (isb., Amaphoyisa, izicishamlilo, njll.).
Adidas ukwenzile. Lenovo ukwenzile futhi. Nawe ungakwenza. Ukunikeza izaphulelo ezikhethekile namakhuphoni kubasebenzi ababalulekile phakathi nobhadane kuqinisa kakhulu ukwethembeka kwamakhasimende kumkhiqizo wakho futhi kwenza inkampani yakho ibe ukukhetha okusobala lapho uthenga. Ngaphandle kwezinzuzo eziqondile ezihlobene nokwandisa ukwethembeka kwamakhasimende kanye ne-CSR, ukuhlinzeka ngamadili kulabo abalwa nolayini obhebhethekisayo kumane nje kuyinto efanele ukwenziwa.
Lapho ngikhuluma ngokwethembeka komkhiqizo, angikwazi ukweqa iqiniso lokuthi ubhadane lushintshele isimilo samakhasimende luye kokugxila enanini. Lokhu kusho ukuthi amakhasimende maningi amathuba okuba akhethe ukunikezwa kwesincintisana naye uma umkhiqizo wakho ungatholakali noma usohlangothini lomkhiqizi. Lokhu kuyiqiniso kuzo zombili izinhlobo ze-B2C ne-B2B. Kungakho ungahlangabezana nokwehla okuphawulekayo ekugqugquzelweni kwamakhasimende futhi amakhasimende ambalwa abuyela ukuzothenga kuwe. Ukunikezwa kwekhuphoni ukubheja okuphephe kakhulu kunemikhankaso yokwethembeka ngezikhathi ezineziyaluyalu ezifana nalezi.
Ukuza nesikhuthazo nekhophi yamakhuphoni abalulekile abasebenzi kuphela kuqondile, kepha ukuhlonza umsebenzisi kungadala inselelo enkulu, kuya ngemithombo yakho yobuchwepheshe. Ngenhlanhla, kukhona amathuluzi afana ISheerID or ID.me lokho kungakusiza ngalo msebenzi. Ungasekela futhi isaphulelo kusizinda se-imeyili njenge I-Beryl, inkampani yokwabelana ngokuhamba, yenzela umkhankaso wabo we-COVID-19.
Isu Lekhuphoni 2: Imikhankaso YeBOGO Yekhuphoni Yokuqeda Isitoko Esidala
Ngesikhathi senkinga ye-COVID-19, abathengisi abaningi bathwala kanzima ukugcina amashalofu abo egcwele. Ukuthenga ukwethuka, izingqinamba zokungena, kanye nokushintsha kokuziphatha kwamakhasimende kubhebhethekise inkinga ngokusetshenziswa kwempahla. Ngenhlanhla, imikhankaso yamakhuphoni inganciphisa ngempumelelo inkinga yesitoko esidala esithatha isikhala sokugcina impahla. Imikhankaso ye-BOGO (Buy-One-Get-One-Free) isengenye yezikhuthazo ezithandwa kakhulu zamakhuphoni kuze kube manje.
Ukukhushulwa kwe-BOGO kuyindlela enhle kakhulu yokukhuthaza izikhuthazo zakho zokuthengisa nokuthengisa phezulu noma ukuhambisa imikhiqizo engathengisi kahle yodwa. Uma lolu bhubhane lubangele ukuthi indawo yakho yokugcina izimpahla igcwale izingubo zokubhukuda noma imishini yokukhempa, unganikela mahhala ngayo kuma-oda athile. Imikhankaso ye-BOGO isebenza kahle ngenani elincane le-oda elifunekayo - amakhasimende kungenzeka akhokhe imali ethe xaxa ngokushintshanisa ngesipho. Ukunqoba kweqiniso. Wonga esikhaleni sokugcina impahla, futhi ivolumu yakho ejwayelekile ye-oda iyakhuphuka ngenkathi amakhasimende ajabule ngomkhiqizo wawo wamahhala.
Isu Lekhuphoni 3: Amakhuphoni asuselwa kunarhoqo
Ubhadane luye lwadala isiyaluyalu uma kukhulunywa ngokwethembeka komkhiqizo. Njengoba amakhasimende elungisa kabusha izintandokazi zomkhiqizo, amabhizinisi adinga ukubuyisa amadala noma agcine amakhasimende amasha. Ukuhlala phezulu kwezingqondo zamakhasimende nokuwagcina ebandakanyekile ngezikhathi ezinde, unganikela ngemikhankaso yekhuphoni ekhuphuka ngenani ngokuthenga ngakunye okusha. Lolu hlobo lwesikhuthazo lukhuthaza ukuthengiswa okuphindwayo ngokunikeza umvuzo ophathekayo wokuthenga ngomkhiqizo wakho. Isibonelo, unganikeza isaphulelo esingu-10% ku-oda lokuqala, u-20% kowesibili, no-30% ekuthengeni kwesithathu.
Ngokuhamba kwesikhathi, kufanele futhi ucabange ngokwakha uhlelo lokwethembeka ukukhombisa ukwazisa kumakhasimende akho anenani eliphezulu.
Isu Lekhuphoni 4: (Hhayi kakhulu) Ukuthengiswa Kwe-Flash
Ukuthengiswa kwe-Flash kuyindlela enhle yokubonisa uphawu lwakho futhi ucindezele amakhasimende ukuthi athenge ngokushesha. Kodwa-ke, kufanele ukhumbule ukuthi i-COVID-19 idale indawo yokuthengisa ehlukile lapho ukukhushulwa kwe-flash kungasebenzi ngaso sonke isikhathi ngenxa yokuphuma kwesitoko nezinkinga zokuhamba. Ukwehlisa ukukhungatheka kwamakhasimende ngamaketanga ophukile wokunikezela, ungacabanga ukunweba usuku lokuphelelwa yisikhathi lokuthengisa kwe-flash. Futhi ungatshala isikhathi esiningi kukhophi yakho yokuthengisa ukuyifaka ngokuphuthuma okushiwo (ngokusebenzisa amagama anjengokuthi “namuhla” noma “manje” ukunxenxa amakhasimende ukuthi enze okuthile. Ngale ndlela, ngeke uguqule okunikezwayo kwakho kuphelelwe yisikhathi esibekiwe, ukunciphisa umthwalo wokugcina ukukhushulwa kwamaqembu akho ezobuchwepheshe nawokumaketha.
Isu lekhuphoni 5: Ukuhanjiswa kwamahhala
Wake wafaka okuthile enqoleni yakho futhi wawubona lowo mlayezo omncane "Faka u- $ X ku-oda lakho ukuze uthole ukuhanjiswa kwamahhala?" Lokho kukuthinte kanjani ukuziphatha kwakho? Ngokwami ​​ukubona, ngibuke inqola yami yase-Amazon ngacabanga, “Kulungile, yini enye engiyidingayo?”
Emvelweni onqenqemeni wokuthengisa okuku-inthanethi okuqiniswe ubhadane, udinga ukubheka kuzo zonke izindawo ukuze uthole inzuzo emakethe. Ukuhanjiswa kwamahhala kuyisu elihle lokuphromotha lokuthola umlenze emncintiswaneni wakho futhi ukhuthaze ukuguqulwa okuningi nemiphumela yokuthengisa engcono. Uma sihlaziya isimo sokuthumela samahhala ngombono wezengqondo, siyabona ukuthi lolu hlobo lokukhuthaza luhlukanisa amakhasimende ngamaqembu amabili - abasebenzisa imali ephansi nabaphezulu. Ngenkathi abathengi abaphezulu bebona ukuthunyelwa kwamahhala njengendlela elula ukwamukela, abathengi abaphansi bazobona ukuthunyelwa kwamahhala njengokuphoqelela ngokwanele ukuthola izinqola zabo kufinyelela entengo ebekiwe. Icebo lapha ukuthi abathengi ekugcineni bangachitha imali ethe xaxa ukuzwa ukuthokoza kokuthola ukulethwa mahhala.
Ngaphandle kwamakhuphoni wokuthumela wamahhala, ungacabanga ngokuza nezinqubomgomo ezinhle zokubuyisa. Izigebenga ezinjenge-Amazon noma iZalando sezivele ziwina izinhliziyo zamakhasimende ngokulethwa okusheshayo nokukhululekile, izikhathi ezinde zokubuyisa, nokuthunyelwa kwamahhala kokubuyisa. Uma futhi ufuna ukwenza inzuzo ngegagasi le-ecommerce elizumayo, izinsizakalo zakho zidinga ukufana nezinga labadlali abaku-inthanethi abakade bekhona. Ungenza ngezifiso amakhuphoni akho ngokususelwa kumlando wokubuyisa ukunikela ngamadili akhethekile wokulawula ukulimaza amakhasimende angenelisekile noma uklomelise labo abangabuyisanga nto ngesikhathi esinqunyelwe.
Isu Lesigqebhezana 6: Amakhuphoni Ozakwethu
Akumangazi ukuthi lolu bhubhane lwaluyinselele ikakhulukazi ezinkampanini ezincane neziphakathi ezinokutholakala okuncane online. Uma uyibhizinisi elinjalo, ungafinyelela kwamanye ama-brand anikezela ngemikhiqizo ehambisanayo neyakho bese unikeza ukukhushulwa okuphambene namakhuphoni wezinsizakalo zakho. Isibonelo, uma unikela ngezesekeli zezinwele, ungafinyelela kumikhiqizo yezimonyo zezinwele noma ama-saloon ezinwele.
Ngakolunye uhlangothi, uma inkampani yakho yasinda emiphumeleni emibi yenkinga yezempilo yango-2020, ungaxhumana nabathengisi abancane ubanikeze ubambiswano nabo. Ngale ndlela, uthola ukusiza amabhizinisi amancane asendaweni yangakini futhi athuthukise ukunikezwa kokuheha kokuheha kwezilaleli zakho. Ngaphezu kwalokho, ngalolu hlobo lomkhankaso wokujoyina amakhuphoni, unweba ukufinyelela kwebhizinisi lakho ngokuvezwa kuniche emakethe ngokuphelele.
Isu Lekhuphoni 7: Amakhuphoni Ahamba Ngeselula
Njengoba abantu ngamanani akhulayo bethenga ngama-smartphones abo, bafuna ukuthi zonke izingxenye zohambo lokuthenga zilungele ukuhamba ngomakhalekhukhwini. Leli qiniso lihlangana kanjani namakhuphoni? Uma usuvele ufunde ukuthi ungawasebenzisa kanjani ama-imeyili aphendulayo ngamakhuphoni, sekuyisikhathi sesinyathelo esilandelayo - ukukhulisa isipiliyoni sokuhlengwa kwesigqebhezana ngamakhodi we-QR. Ngokunikeza amakhodi ngezindlela ezimbili (umbhalo ne-QR), uqinisekisa ukuthi izaphulelo zakho zingatholakala ku-inthanethi naku-inthanethi. Leso yisinyathelo sokuqala sokwenza amakhuphoni akho alungele ukuhamba ngeselula.
Ngaphandle kwamakhodi we-QR, futhi unganweba isiteshi sakho sokulethwa kwekhuphoni ukufaka imilayezo yombhalo bese ucindezela izaziso. Kungani? Ama-imeyili awasona isiteshi esihle kakhulu sokuthwebula ukunaka kwamakhasimende ngokushesha futhi aqalise ukuxhumana okusheshayo. Iziteshi zokulethwa kwamaselula zihambisana kahle nokunikezwa kwekhuphoni okusekwe endaweni futhi kukuvumela ukuthi uphendule ngokushesha emisebenzini ethile yomsebenzisi noma ezimeni, njengesimo sezulu esibi noma ukungasebenzi.
Kunamasu ahlukahlukene wesigqebhezana ukukusiza ukuthi uqhubekele isu lakho lekhuphoni phambili. Noma ngabe ukuphi ngoshintsho lwakho lwedijithali, amakhuphoni angakusiza wenze imilayezo yakho ibe ngeyakho, uzame iziteshi ezintsha zokulethwa, futhi wandise isabelomali sephromoshini emakethe enesiphithiphithi.
Amasu Wakho Wokukhangisa Amakhuphoni Ngesikhathi Sobhubhane
Ngenkathi ubhadane lwe-coronavirus lusheshisela ukushintshela kuyo yonke into yedijithali, indlela yendabuko yosayizi owodwa ifanela konke ukukhushulwa sekuphelelwe yisikhathi. Esimweni sokuncintisana se-COVID-19 se-ecommerce, ama-brand bekufanele asebenzise izaphulelo ukuze ahehe abathengi abazi ngentengo futhi anikeze inani elengeziwe emakethe egcwele izipesheli ezifanayo.
Isu elicatshangwe kahle lekhuphoni manje sekufanele libe nalo kumabhizinisi amaningi we-ecommerce uma inhloso yabo ihlala ihlala phezulu ezingqondweni zamakhasimende. Ngamanani wokuhlengwa kwamakhuphoni akhuphuka kakhulu e-US nasemhlabeni jikelele, umkhiqizo wakho kufanele ungene kumathuluzi amakhulu okwenza izaphulelo. Kepha iziphi izaphulelo nemikhankaso yekhuphoni okufanele uyiqhube?
Le ndatshana ibala amasu womkhankaso wesigqebhezana angcono kakhulu (futhi asebenza kahle kakhulu) ngezikhathi zokungaqiniseki kwemakethe enkulu - kusuka kumakhuphoni ezisebenzi ezibalulekile, amaphromoshini wokuhambisa mahhala kuya kokuhlangenwe nakho kwamakhuphoni okulungele ukuhamba namaselula. Noma ngabe ukuphi njengamanje ohambweni lwakho lwenguquko yedijithali, amakhuphoni angakusiza wenze imilayezo yakho ibe ngeyakho, uzame iziteshi ezintsha zokulethwa, futhi wandise isabelomali sephromoshini emakethe eneziyaluyalu.
Tags: amakhuphoni we-bogoamasu amakhuphoniamakhuphonii-covid-19flash ukuthengisa amakhuphoniimvamisa amakhuphonikhiqiza ukuguqulwa onlineamakhuphoni eselulaamakhuphoni asebenziseka kalulaubhubhaneamakhuphoni kazakwethuamakhuphoni e-post-ecommercevoucherify
Uchwepheshe Wokuthuthukiswa Kokuqukethwe onolwazi lokumaketha kwedijithali. Umuntu osanda kuphothula izifundo ze-American Studies and English Culture. Unolwazi lokusebenza endaweni yokuncintisana ye-SaaS. Kucatshangelwe ngazo zonke izinto ukumaketha kwanamuhla, ama-analytics, nokwaluka ubuchwepheshe obusha bekhodi ephansi kuzinqubo zebhizinisi. Umbhali wamakhophi we-B2B ozimisele wezithameli ezahlukahlukene, kufaka phakathi abathuthukisi, abathengisi, nabaphathi, kanye nobubanzi obubanzi bempahla - amawebhusayithi, izindatshana, izifundo zamacala, imibhalo yevidiyo, nokuningi. Njengamanje sisebenzela iVoucherify.io, sibhekene namasu wokuqukethwe wokwakha, ukumaketha kwevidiyo, ne-SEO. Ngasese, umlandeli wemidlalo yevidiyo, imibhalo eqanjiwe kanye nezifundo ze-veganism.